किन झ’र्छ कपाल ? यस्तो छ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले दिएको सुझाव – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकिन झ’र्छ कपाल ? यस्तो छ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले दिएको सुझाव
काठमाडौं, कपाल झ’र्ने स’मस्याबाट धेरै मानिस चि’न्तित हुने गरेका छन् । व्यक्तिको वास्तविक ‘लुक’ देखाउन कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हेयर स्टाइल मात्र बदलियो भने पनि व्यक्तिको सुन्दरतामा निकै अन्तर आउँछ । कपालले अनुहारको वास्तविक ‘सेप’ र सुन्दरता देखाउन मद्दत गर्छ ।कपाल झ’रेर तालु खुइलिनु कुनै जटिल रो’ग होइन । तर, पनि कपाल मानिसको सौन्दर्यसँग जोडिने भएकाले तालु खु’इलिएकाहरू पुनः कपाल प्राप्तिका लागि विभिन्न उपाय गरिरहेका हुन्छन् । कपाल विभिन्न कारणले झ’र्छ ।